Hiriira Mormii Manneen Barnoota Bishooftuu Irratti Nama Hedduutti Hidhamee Jedhanii Bulchiinsii Ammoo Dhara Jedha
Hiriira manneen barnoota bishooftuu fi deebii bulchiinsaa
Godina Shawaa Dhiyaa manneen barnoota sadarkaa tokkeessoo,lammeessoo fi qophaahinaa keessatti akka barattootaa fi jiraattotii jedhanitit dhiyoo tanaayyuu baarttootii gaafii hedduu gaafachuuf hiriira bahan.
Mana barumsa Qophaahina Bishooftuutti ammoo hardhaa fi kaleellee barattootii hiriira bahanii waan hedduu gaafachuu yaalan.
Yoo baattootii mana barumsa Qophaahina Bushooftuu hardha bahanitti akka jecha barattootaatti poolisii federaalaatti ijoollee dhaanee bittinneessee kaan hidhe.
Manneen barnootaa Bishooftuu dhiyoo tanaayyuu gaafilee hedduu gaafachuuf manuma barumsaa keessatti hiriira jalqaban jedhan barattootii.
Manneen barnootaa dhiyoo tana hiriira itti bahan jehda mana barumsa Qophaahina Bishooftuu, mana barumsa Dhibaabyyuu sadarkaa tokkeessoo, mana barumsa Bolee sadarakaa tokkeessoo,Mana barumsa sadakaa lammeessoo Bishooftuu,Mana barumsa sadarkaa lammeessoo Adahaa fa. Jara kana keessaa hedduuti hdihamee jedhan barattootii.
Waan barattootii gaafatan jedhan keessaa fkn barattootii mana barumsaa Dhibaayyuu rakko bisaani,ibsee,karaa fi qabeennii uumamaa naannoo isaaniiti bahu makiinaatti fahanii maasaa qonnaan bulaatti awwaara kaasee dabruu goggosuu malee faaydaa akka hin kennine dubbatan.
Gama kaaniin hidhamaan akka hiikamu,ka du’ee gumaan akka bahu,hidhaa fi dhaanichii akka dhaabatu fa gaaatan jedhan.
Taatullee akka jecha itti gaafatamaa dhimmi nageenna magaalaa Bushooftuu obboo Asebeen jedhetti hiriirii hin jiruu,barattoota lama kalee mana barumsa Qophaahina Bishooftuutti daawwitii caaccabsan malee namii hidhame hin jiru.